खोपमा सबैको पहुँच हुनुपर्छ: प्रधानमन्त्री देउवा। - Malayakhabar
होम पेज फिचर खोपमा सबैको पहुँच हुनुपर्छ: प्रधानमन्त्री देउवा।
खोपमा सबैको पहुँच हुनुपर्छ: प्रधानमन्त्री देउवा।
काठमाडौं:= प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले खोपमा सबैको पहुँच हुनुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको क्षेत्रीय बैठकको सोमबार उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले खोप, औषधि, औजार तथा प्रविधिमा समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो । उहाँले बैठकलाई भर्चुअलरूपमा सम्बोधन गर्दै कोरोना महामारीले जीवन, जनस्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षामा असर पारेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीयस्तरबाट महामारी रोक्न सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
‘हाम्रा स्वास्थ्य प्रणालीहरूले अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवाहरू प्रदान गर्ने क्रममा क्षमताभन्दा बढी भार थेग्नु परिरहेको अहिलेको अवस्थामा यस क्षेत्रका मानिसको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार ल्याउनका लागि महत्वपूर्ण निर्णयहरू लिनका लागि यो बैठक आयोजना गरिएको छ’, देउवाले भन्नुभयो, ‘मानवताका लागि हामीले खोप, औषधि, औजार तथा प्रविधिमा समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ । पहुँच नपाएकाहरूसम्म पुग्ने हाम्रो प्राथमिकता हुनुपर्छ ।’
प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालतर्फबाट स्वास्थ्यमन्त्रीको हैसियतमा अध्यक्षतामा ग्रहण गर्नुभएको थियो । बैठकमा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले सबै मिलेर कोरोना भाइरस रोकथाम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले अहिले नेपालमा एक करोडभन्दा बढीले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाइसकेको भन्दै आगामी असोज महिनाभित्रमा नै ३३ प्रतिशतलाई खोप लगाउने जानकारी दिनुभयो ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका महानिर्देशक डा. टेड्रोस अधानोम घेब्रेसियसले कोभिड–१९ महामारीले अझै पनि जीवन, जीविका, समाज तथा अर्थतन्त्रमा क्षति पु¥याइरहेको बताउनुभयो । ‘देशपिच्छे र ठाउँपिच्छे फरकफरक अवस्था विद्यमान छ र केही स्थानहरूमा तीव्र संख्यामा संक्रमण वृद्धि भइरहेको र अस्पताल भरिएको अवस्था छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले अब भविष्यमा फेरि यस्तो ठूलो महामारी हुन दिनुहुँदैन।’
क्षेत्रीय निर्देशक डा. पुनम खेत्रपालले कोभिड-१९ ले हाम्रा स्वास्थ्य प्रणालीलाई ठूलो क्षति पु¥याएको बताउनुभयो । यही भदौ २५ गतेसम्म भर्चुअलरूपमा हुने बैठकमा यस क्षेत्रका सदस्य राष्ट्रका स्वास्थ्यमन्त्री तथा स्वास्थ्यका उच्च पदाधिकारी, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय, साझेदार, दातृ निकाय तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको छ । बैठकमा नेपाल, बंगलादेश, भारत, भुटान, श्रीलंका, माल्दिभ्स, थाइल्याण्ड, उत्तर कोरिया, इण्डोनेसिया, म्यानमार, पूर्वी टिमोरका स्वास्थ्यमन्त्री सहभागी छन् ।
स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ कोभिड–१९ महामारीले क्षति पु¥याएका अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवाहरूको ‘अझ राम्रो पुनर्निर्माण’ विषयमा आज (मंगलबार) मन्त्रीस्तरीय गोलमेच हुने कार्यक्रम छ । छलफल हुने अन्य मुख्य मुद्दाहरूमा खोपको कार्ययोजनाका लागि क्षेत्रीय खाका, विद्यालय स्वास्थ्यको पुनरुत्थान, र भाइरल हेपाटाइटिस, एचआइभी तथा यौनजन्य संक्रमणको अन्त्य रहेको जनाइएको छ ।
असोज १ देखि विद्यालय खुल्ने
काठमाडौं उपत्यकामा आगामी असोज १ गतेदेखि विद्यालय खुल्ने भएका छन् । काठमाडौं प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ), उपत्यकाका स्थानीय तहहरूबीच सोमबार भएको बैठकले असोज १ गतेदेखि विद्यालय खोल्ने निर्णय गरेको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अघिल्लो साता नै उपत्यकामा विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने गरी आदेश जारी गरेसँगै स्थानीय तहहरूले विद्यालय खोल्ने तयारी गरेका हुन् । विद्यालय सञ्चालन गर्दा स्थानीय तहहरूले जिल्ला कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डिसिसिएमसी) सँग समन्वय गर्नुपर्ने भनिएपछि सोबारे अन्तिम टुंगो गर्न आइतबार बैठक बसेको हो।
थप १८ सय ९७ जनामा कोरोना संक्रमण, २० को मृत्यु
सोमबार थप एक हजार ८९७ जनामा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)को संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो समय देशभर गरिएको ११ हजार ६०९ पिसिआर र चार हजार ३७० जनाको एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा एक हजार ८९७ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
सोमबार काठमाडौं उपत्यकामा थप ६०६ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौंमा ४१८, भक्तपुरमा १०१ र ललितपुरमा ८७ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो । योसँगै देशभर कुल संक्रमितको संख्या सात लाख ७० हजार ७५९ पुगेको छ । कुल संक्रमितमध्ये ३० हजार ९७३ सक्रिय संक्रमित छन् । सक्रिय संक्रमितमध्ये २८ हजार ९११ जना होम आइसोलेसन र दुई हजार ६२ जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन् । देशका विभिन्न अस्पतालमा आइसीयूमा ५१२ जना र भेन्टिलेटरमा १६३ जना उपचाररत छन् ।
यस्तै, सोमबार एक हजार ७४३ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् । योसँगै सात लाख २८ हजार ९२८ जना कोरोना संक्रमणमुक्त भएका छन् । हाल नेपालमा संक्रमणमुक्त हुने दर ९४ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
थप २० जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएकोक छ । योसँगै कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या १० हजार ८५८ पुगेको छ । मन्त्रालयको अनुसार नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणदर ११.८ प्रतिशत छ भने मृत्युदर १.५ प्रतिशत छ ।
अघिल्लो लेख दाङको प्रदेश मन्त्रालयमा बस्न मान्दैनन् कर्मचारी।
पछिल्लो लेख दानबाट प्राप्त अस्पताल निर्माणको जग्गामा जनप्रतिनिधिको रजाइँ।